Moosend: Suuq-geynta Emailka & otomatiyada | Martech Zone
Axad, Febraayo 17, 2019 Isniin, February 18, 2019 George Fakorellis
Moosend, la abaal mariyey Suuqgeynta Suuqgeynta iyo is-gaarsiinta, ayaa dib-u-qeexey astaamaha suuqgeynta iimaylka, qorshooyinka qiimaha, iyo qiimaha lacagta oo leh joogteynteeda, u heellan heer sare, iyo waxqabadka taageerada macaamiisha.
8 sano gudahood, Moosend waxay ku guuleysatay inay sameysato joogitaan caalami ah wakaalado heer sare ah iyo shirkado caalami ah sida Ted-X, Iyo ING, in la magacaabo laakiin inyar.
Moosend ahaa madal ugu horeysay ee warshadaha in ay noqon ISO-shahaado iyo GDPR-waafaqsan, taas oo caddaynaysa ku-dhaqankeeda in loogu talagalay iyada oo maskaxda lagu hayo hanuuninta isticmaalaha.
Wixii ku billowday emayl ahaan, ayaa meeshiisii ​​siiyay Suuqgeynta Emailka iyo otomaatiyada, iyo hadda AI.
Markii e-maylkii ugu horreeyey la diray 1971, ayaa taariikh la sameeyey. Hadda, 2019, emaylku wuxuu isu beddelay mid awood badan istaraatijiyad marketing shaqaaleeyeen khubaro suuq geyn iyo isticmaaleyaal maalinle ah si isku mid ah, iyagoo ku qanacsan 400% ROI.
Taasi waa maxaa yeelay, Tiknoolajiyada Suuq geynta Emailka ayaa is bedeshay si weyn, u siinaya Suuqgeyaal xalal aad u wanaagsan oo ku aaddan dhibaatooyin fara badan.
Asal ahaan, Meelaha Suuqgeynta Emailka waxay u xuubsiibteen illaa heer aysan ahayn oo keliya aaladda wargeysyada laakiin, taa bedelkeeda, ay tahay xiriir dhexdhexaad ah oo u dhexeeya suuqleyda iyo dhagaystayaashooda.
Moosend waa mid la awoodi karo emailka suuq-geynta kaas oo dabooli kara baahiyo badan oo suuq geyn ah waxayna ku haboontahay shirkadaha waaweyn ee leh dalabyo badan ama kuwa yar yar oo miisaaniyad adag leh.
Sanado badan, Moosend ayaa la kulantay koritaan aad u weyn sababtoo ah moodelladooda diiradda saaraya iyo adeegga taageerada ee gaarka ah kaasoo abuuray lakab aamin ah oo u dhexeeya iyaga iyo macaamiishooda.
Waxay ku guuleysteen inay ogaadaan meelaha adag iyo kuwa daciifka ah ee wax soo saarkooda iyo suuqyadooda waxayna sameeyeen saxitaan sax ah si ay u bixiyaan xal dhameystiran.
Tan waxaa isla markiiba lagu xaqiijin karaa websaydhada dib-u-eegista barnaamijyada u gaarka ah, sida Kafeega iyo Dadweynaha G2, halkaas oo Moosend wuxuu ka mid yahay kuwa ugu sareeya suuq geynta Softwares aduunka.
Xalka Moosend ee Suuqgeynta Emailka
Moosend ee suuq geynta softiweerka waa daruur ku saleysan oo ujeedadeedu tahay in la siiyo suuqleyda xiriir qoto dheer oo joogto ah oo lala yeesho dhagaystayaashooda. Waa adeeg dhameystiran oo leh a interface fudud oo dareen leh taasi waxay ka dhigaysaa marinka aaladda qalab fudud oo dabiici ah.
Si kastaba ha noqotee waxa run ahaantii ka dhigaya Moosend inuu istaago, waa mugga iyo noocyada kala duwan ee otomaatiyada iyo sidoo kale qorshooyinka qiimaha ee aadka u tartamaya oo dabacsan.
Waa in la sheegaa inay jirto gabi ahaanba qorshe-abid ah oo bilaash ah illaa 1000 macmiil, taas oo ka badan soo dhaweyn.
Dabcan, Moosend wuxuu fahamsan yahay sida ay muhiimka ugu tahay suuqleydu inuu awoodo inuu cabiro dadaalkiisa. Taasi waa sababta ay barxaddu u bixiso muuqaal tijaabin kala qaybsan A / B iyo mid u gaar ah Analytics wararka taas oo siin karta dadka isticmaala aragti waxtar leh oo faahfaahsan ee ololahooda.
A isticmaale-saaxiibtinimo, tafatiraha jiididda iyo hoos u dhaca sidoo kale waa lagu darayaa taas oo ah mid aad u ballaadhan maadaama aad ku abuuri karto joornaalkaaga daqiiqado gudahood adigoon la halgamin softiweerka tafatirka dibadda oo aad u dhib badan. Mawduucyada lagu daray ayaa ah taabasho fiican sidoo kale.
Ugu dambeyntii, Moosend waa la isku dari karaa oo leh aalado caan ah sida Magento, WooCommerce, iyo Zapier, oo ah wax ku daraya xitaa qaabab badan barxadda.
Dhaqanka ugufiican ee Suuqgeynta Emailka
Inta badan shirkadaha adeegsada Email Marketing ugu yaraan qayb ka mid ah dadaalkooda suuq-geynta ayaa ogaan doona inay ka faa'iideysanayaan kuwa la tartamaya.
Si kastaba ha noqotee, maahan in la yiraahdo Suuqgeynta Emailku waa sahlan tahay.
Waxaa la cadeeyay inay jiraan farsamooyin kaladuwan oo sifiican ushaqeeya ayna tahay inuu adeegsado suuqle kasta oo raba inuu ku gaadho sida ugufiican ee shirkadiisa.
Liiska Liiska waa waxa ka dhigaya suuqgeynta emailka mid guuleysta. Macaamiisha maanta ma rabaan in lagu duqeeyo fariimo ganacsi oo aan khusayn. Qof kastaa ma doonayo inuu wax ka maqlo wax walba iyo habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo taas iyada oo liistada macaamiishu ay tahay iyaga oo u kala qaybinaya liisas kala duwan.
U Adeegsiga Suuq Geynta Emailka ee Lagu Koriyo Lead. Isticmaalkan Suuqgeynta Emailka ayaa soo socday muddo sannado ah. Ujeedada laga leeyahay dhaqankaas maahan in isla markiiba loo beddelo hoggaanka laakiin waa in wax la baro oo loo beddelo mustaqbalka dambe.
Isticmaalka Gaadiidka Suuqgeynta waxay ku dhufan kartaa natiijooyinka wanaagsan ee shirkadda iyada oo aan loo baahnayn inay maal gasho waqti dheeri ah ama ilaha aadanaha. Dhaqankan waxaa loo isticmaali karaa emayllada ay tahay in la sameeyo toos u kiciya ka dib dhacdooyin gaar ah sida Ka tagida gaadhiga or soo dhawoow emaylka.
Moosend wuxuu u adeegaa kumanaan shirkadood adduunka warshado badan oo kaladuwan sida Suuqgeynta Emailku waa shey muhiim u ah isgaarsiinta suuq geynta oo looga faa’iideysan karo ganacsi kasta oo suurtagal ah oo jira.
Moosend waa wax walba oo ay ballanqaadayaan inay noqdaan, iyo in ka badan! Isgaarsiintu aad ayey u wanaagsan tahay, labadeenna maamule akoonkeena Moosend iyo kooxda taageerada farsamada ayaa kor iyo dhaafba ka baxay si ay nooga caawiyaan inaan gaarno yoolalkayaga, waqti kasta oo aan u baahanahay. Shayga sidoo kale runti waa dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo. Kuma talin karo Moosend ku filan ganacsi kasta oo raadinaya ESP cusub.
Anthony Rigby oo ka socda CareerBuilder
Xilligii dhijitaalka ahaa waxyaabaha software baraaraan markay noqdaan kuwo aad iyo aad daruuri ugu ah shirkadaha. Si loo kala saaro tartamayaasha, ganacsiyada hadda waa inay siiyaan macaamiishooda wax ka badan wax soo saar wanaagsan. Shirkadaha ugu guulaha badan ee halkaa ka jira waxay ku xisaabtamaan gaarsiinta qiimaha, aqoonta, iyo khibradda ay u leeyihiin macaamiishooda.
Macaamiisha ayaa raacay dariiqa dabiiciga ah ee horumarka mana sii aaminaan ereyada cad. Taabadalkeed, way raadinayaan qiyamka ka soo baxa tayada badeecada iyo qiimaheeda (maahan inaad dhahdo waxyaabahan mar dambe dhib malahan).
Moosend wuu ogyahay taas waana sababta ay diiradda u saareen wax ku biirinta bulshadooda taageero macaamiil oo had iyo jeer la heli karo, iyaga maktabad kooban mawduuca Suuqgeynta iyo qalabkooda waxtar leh ee haddana bilaashka ah sida Tijaabiyaha Khadka Mawduuca Bilaashka ah.
Tags: suuq-geynta suuqa
George waa a Isuduwaha Suuqgeynta Kobaca u shaqeeya emaylka software otomaatiga Moosend! Wuxuu jecel yahay inuu wax ka qoro Suuqgeynta xilliyada Dijital ah iyo koritaanka koritaanka ee uu ku ogaanayo sahamintiisa maalinlaha ah. Wuxuu had iyo jeer xiiseeyaa inuu ka hadlo khibradaha iyo fikradaha sidaa darteed xor u noqo inaad u dirto farriin uu kula wadaago aqoontaada xiisaha leh.
Dhisida Liiska Boosta ee Suuqgeynta Emailka